अभिनेत्री जुही चावला बलिउडबाट अस्ताईन किन होला??? – News Nepali Dainik
अभिनेत्री जुही चावला बलिउडबाट अस्ताईन किन होला???
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २४, २०७७ समय: ११:१०:२१
बलिउडमा आफ्नो चुलबुलेपनका लागि चर्चित अभिनेत्री जुही चावलाको एक चर्चित नायिका हुन् । हिन्दी बाहेक उनले बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड र तेलगु फिल्महरूमा पनि काम गरेकी छन। जूहीले १९८४ मा मिस इन्डियाको उपाधि जितेकी थिइन। उनलाई उपाधिको ताज रेखाले लगाइ दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनले हिन्दी चलचित्रहरूमा कदम राखिन्।
जूहीले १९८६ को फिल्म सल्तनतबाट हिन्दी चलचित्रमा आफ्नो क्यारियर शुरू गरेकी हुन्, तर फिल्म फ्लप भयो। त्यसपछि उनि कन्नड़ फिल्महरूमा अभिनय गरिन् । त्यहाँ सफलता पाएसँगै जूही फेरि बलिउडमा फर्किइन् । जुहीले ९० को दशकमा आमिर खान र शाहरुख खानका साथ धेरै हिट फिल्म दिएकी छन् । उनले फिल्म ‘कयामत से कयामत’ मा पहिलो ठूलो सफलता पाइन् ।
फिल्म हिट भयो र जुहीको अभिनय पनि प्रशंसनीय थियो। उनलाई यस फिल्मका लागि फिल्मफेयर पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो। यसपछि, उनी १९९० को फिल्म ‘प्रतिबन्ध’ मा देखा परिन् उनको अभिनय मानिसहरूले धेरै मन पराएका थिए। यहीबाट जूही चावलाको स्टारडमको यात्रा सुरु भयो।
सन् १९९२ मा उनी ऋषि कपूरसँग फिल्म ‘बोल राधा बोल’ मा देखा परिन् । यो फिल्म हिट मात्र भएन ऋषि कपूर र जूही चावलाको जोडी पनि रुचाइयो। यस फिल्मबाट जूहीले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको लागि फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त गरिन्।
यसपछि एक फिल्मले उनलाई बलिउड से’ ‘क्स सा’इरनको नयाँ परिचय दियो। यो फिल्म ‘लु’टेरे’ थियो जसमा उहाँसँग सनी देवल, नसीरुद्दीन शाह र चंकी पाण्डे थिए, पछि तीन थप ब्याक-टु-बैक फिल्म आयो यी सबै हिट फिल्म थिए।
यसमा ‘आईना’, ‘हम हे राही प्यार के’ र ‘हिम्मत’ जस्ता फिल्महरू सामेल छन्। ‘हम हे राही प्यार के’ को अभिनय जूही चावलाको क्यारियरको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मानियो र आमिर खानसँगको उनको जोडी पनि प्रशंसनीय थियो। १९९० देखि १९९९ बीचमा जूही चावलाका धेरैजसो फिल्महरू हिट भएका थिए।
यसलाई जूहीको क्यारियरको स्टारडम अवधि मानिन्छ। हिन्दी सिनेमामा पहिचान बनाएकी उनको क्यारियरमा, जूही चावलाले यस बोस’, ‘मिस्टर एण्ड मिसेस खेलाडी’ र ‘दीवाना मस्ताना’ जस्ता केही हल्का हास्य फिल्महरू पनि गरिसकेकी छिन्। जूहीलाई हास्य विधामा पनि मन पराइएको थियो।
‘डर’ पछि उनी फेरि शाहरुख खानसँग फिल्म ‘डुप्लीकेट’ मा देखा परिन्। यो फिल्मले बाकस अफिसमा खासै राम्रो गर्न सकेन तर शाहरुख र जुहीको केमिस्ट्री धेरै मन पराइयो। सन् २००० मा उत्कृष्ट फिल्महरू गरिसकेपछि जूहीले थोरै मात्र फिल्महरूमा अभिनय गर्न थालिन्।
जुहीले सन् १९९५ मा व्यापारी जय मेहतासँग विवाह गरिन्। विवाहपछि जुही पलायन भइन् । उनीहरूका दुई बच्चाहरू जान्हवी र अर्जुन छन्।
एक कार्यक्रममा उनले आमिर खानलाई बाहिरी रुपले सोझो देखिए पनि भित्री रुपमा शैतान सरह रहेको आरोप लगाएकी थिइन् । ‘कयामत से कयामत तक’मा आमिरसँग काम गरेकी जुहीले भनेकी छन्,‘आमिर खान माथिबाट हेर्दा सोझो भए पनि उनी सैतान जस्ता छन् ।’
उनले सन् १९९० मा रिलिज भएको फिल्म ‘तुम मेरे हो’ को सुटिङको समय स्मरण गर्दै भनिन्,‘मलाई सर्पदेखि निकै डरलाग्छ र एक सुटिङको बेला मलाई डराउनका लागि आमिर मेरो पछाडि स’र्प लिएर दौडिएका थिए । आमिर र शाहरुख दुवै स्वभावका कारण अलग छन् तर दुवैजना बुद्धिमान छन् ।’ चर्चामा रहँदै गर्दा बिवाह गरेकी जुहीले अन्ततः बलिउडमा काम पाउन छाडिन र दर्शक श्रोता माझ बाट अस्ताएकी छन् ।’ जुही चावलाको जोश र जाँगर देखेर अहिले पनि कतिपय बलिउडकर्मी लोभिने गर्छन् । ५३ वर्ष पूरा भएकी जुही पछिल्ल्ाो समय फिल्म अभिनयमा त्यति सक्रिय छैनन् । तर, सार्वजनिक कार्यक्रममा उनको उपस्थित सक्रियतापूर्वक हुने गरेको छ ।
Last Updated on: February 6th, 2021 at 11:10 am